DiRT RALLY 2.0 လာဦးမည် – REDPlayer
Okလေ… ဒါက Dirt အကြောင်းရေးမလို့ Forza ကတော့ ဆော့နေတုန်းပဲ… ပြီးရင်တော့ review သေးသေးလေးရေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ လောဆယ် ဆီဈေးကြီးနေတော့ အဖေ့ကားတောင် ယူမမောင်းရဲဘူး။ ဆီပြန်ထည့်ပေးနေရမှာစိုးလို့။ ဂိမ်းထဲမှာပဲမောင်းနေဒယ်။ NFS ကိုချစ်ခဲ့ရင် Dirt ကိုချစ်ခဲ့မှာပဲ Forza ကို $ ကြောင့် အလှမ်းဝေးနိုင်ပေမယ့် Dirt ကို ချစ်ခဲ့ရင် Dirt rally ကိုလည်းဆော့ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ရွံ့တွေချည်းပဲလေ။ အခုအဲ့ ရွံ့တွေ…. အဲ့ Dirt Rally2ကို လာမယ့် February 2019 မှာ လာမယ့်အကြောင်း သူ့ရဲ့ developer ဖြစ်တဲ့ codemaster က ပြောပါတယ်။ Trailer တော့ရှာလို့ရတာထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
DiRT ပွဲတွေကသိတဲ့အတိုင်း arcade ဆန်တယ်။ တစ်ခြား ကားမောင်းတဲ့ simulation တွေနဲ့ယှဉ်ရင်ပေါ့လေ။ လက်ရှိလာမယ့် DiRT Rally2ကတော့ codemaster အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် February မှာထွက်မယ်ပြောနေတဲ့ ဒီဂိမ်းက အခုအချိန်ထိ ဝိုးတဝါးဖြစ်နေတာတော့ သိပ်အားမရဘူးပေါ့။ ပါလာမယ်ဆိုရင် လက်ရှိ အပြင်က WRC မှာဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေရယ် အပြင်က driver တွေနဲ့ပြောသင့်တာတွေ ပြင်သင့်တာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကားအသစ်တွေ၊ ပိုပြီး စုံလင်တဲ့ စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ အပြင်လောကရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကိုပါထည့်ပေးလာသင့်နေပါပြီ။
Interview တစ်ချို့မှာတော့ အပြင်က လက်ရှိ driver တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေရှိကြောင်းပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အားမရဘူးဆိုပေမယ့် မကြာခင်တော့ သူတို့ရဲ့ marketing campaign ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့အချိန်ကျရင်တော့ သူတို့ သေသေချာချာ ထုတ်ပြကောင်းပါရဲ့။
အချုအချိန်မှာတော့ Steam ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် Dirt4နဲ့ Dirt rally ကို discount ချထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Okလေ… ဒါက Dirt အကွောငျးရေးမလို့ Forza ကတော့ ဆော့နတေုနျးပဲ… ပွီးရငျတော့ review သေးသေးလေးရေးဖွဈမယျထငျတယျ။ လောဆယျ ဆီဈေးကွီးနတေော့ အဖကေ့ားတောငျ ယူမမောငျးရဲဘူး။ ဆီပွနျထညျ့ပေးနရေမှာစိုးလို့။ ဂိမျးထဲမှာပဲမောငျးနဒေယျ။ NFS ကိုခဈြခဲ့ရငျ Dirt ကိုခဈြခဲ့မှာပဲ Forza ကို $ ကွောငျ့ အလှမျးဝေးနိုငျပမေယျ့ Dirt ကို ခဈြခဲ့ရငျ Dirt rally ကိုလညျးဆော့ခဲ့ဖူးပါလိမျ့မယျ။ ရှံ့တှခေညျြးပဲလေ။ အခုအဲ့ ရှံ့တှေ…. အဲ့ Dirt Rally2ကို လာမယျ့ February 2019 မှာ လာမယျ့အကွောငျး သူ့ရဲ့ developer ဖွဈတဲ့ codemaster က ပွောပါတယျ။ Trailer တော့ရှာလို့ရတာထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။
DiRT ပှဲတှကေသိတဲ့အတိုငျး arcade ဆနျတယျ။ တဈခွား ကားမောငျးတဲ့ simulation တှနေဲ့ယှဉျရငျပေါ့လေ။ လကျရှိလာမယျ့ DiRT Rally2ကတော့ codemaster အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ February မှာထှကျမယျပွောနတေဲ့ ဒီဂိမျးက အခုအခြိနျထိ ဝိုးတဝါးဖွဈနတောတော့ သိပျအားမရဘူးပေါ့။ ပါလာမယျဆိုရငျ လကျရှိ အပွငျက WRC မှာဖွဈနတေဲ့ ကိစ်စတှရေယျ အပွငျက driver တှနေဲ့ပွောသငျ့တာတှေ ပွငျသငျ့တာတှရှေိပါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ ကားအသဈတှေ၊ ပိုပွီး စုံလငျတဲ့ စိတျတိုငျးကပြွငျဆငျလို့ရတဲ့ စကျပိုငျးဆိုငျရာတှနေဲ့ အပွငျလောကရဲ့ သကျရောကျမှုတှကေိုပါထညျ့ပေးလာသငျ့နပေါပွီ။
Interview တဈခြို့မှာတော့ အပွငျက လကျရှိ driver တှနေဲ့ဆှေးနှေးတိုငျပငျမှုတှရှေိကွောငျးပွောထားတာတှရေ့ပါတယျ။ အားမရဘူးဆိုပမေယျ့ မကွာခငျတော့ သူတို့ရဲ့ marketing campaign ထှကျလာပါလိမျ့မယျ။ အဲ့အခြိနျကရြငျတော့ သူတို့ သသေခြောခြာ ထုတျပွကောငျးပါရဲ့။
အခြုအခြိနျမှာတော့ Steam ကိုသှားကွညျ့မယျဆိုရငျ Dirt4နဲ့ Dirt rally ကို discount ခထြားတာတှပေ့ါလိမျ့မယျ။
Tags cars Rally simulation